မူဆယ်မြို့ အိမ်ခေါင်မိုးသွပ်နှင့် ကပ်လျက်ရှိသောဝိုင်ယာကြိုး အပူရှိန်လွန်ကဲရာမှ မီးလောင? - Yangon Media Group
မူဆယ်မြို့ အိမ်ခေါင်မိုးသွပ်နှင့် ကပ်လျက်ရှိသောဝိုင်ယာကြိုး အပူရှိန်လွန်ကဲရာမှ မီးလောင?
မူဆယ်၊ မတ်လ ၃ဝ- ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) မူဆယ်မြို့ ခရစ်ယာန်ရပ်ကွက် နယ်မြေ(၅)၌ မတ် ၃ဝ ရက် ညနေ ၃ နာရီခွဲခန့် က အိမ်ခေါင်မိုးသွပ်နှင့်ကပ်လျက်ရှိသော ဝိုင်ယာကြိုးသည် အပူ လွန်ကဲရာမှ မြေစိုက်အိမ်တစ်လုံးမီးလောင်ခဲ့ပြီး ယင်းနှင့်ကပ်လျက် ရှိသော နှစ်ထပ်အိမ်၏မျက်နှာကြက်သို့မီးကူးကာ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
”ဝိုင်ယာရှော့ခ်ဖြစ်တာပါ။ အိမ်အမိုးနဲ့ကပ်လျက်ရှိတဲ့ ဝိုင်ယာကြိုး မှ အပူလွန်ကဲပြီး မီးစတင်လောင်ခဲ့တာပါ။ မြေစိုက်အိမ်တစ်လုံးနဲ့ ယင်းအိမ်နဲ့ကပ်နေတဲ့ဘေးအိမ်ရဲ့ မျက်နှာကြက်ကို မီးကူးစက်လောင် တာ တွေ့ရှိရပါတယ်။ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးကတော့ ကျပ် ၁၅ သိန်း ခန့်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ မီးသတင်းကို ညနေ ၃ နာရီ ၂၅ မိနစ်မှာစတင် ရရှိပြီး သန္ဓေမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၅ ဦး မီးငြှိမ်းသတ်ယာဉ် နှစ်စီး၊ မီးသတ်ရေသယ်ယာဉ် ခြောက်စီးတို့နဲ့ ရေဂါလန် ၁ဝဝဝဝ ခန့်အသုံး ပြု မီးငြှိမ်းသတ်ခဲ့ပါတယ်။ ညနေ ၄ နာရီခန့်မှာ မီးလုံးဝငြိမ်းခဲ့ပါ တယ်”ဟု မူဆယ်ခရိုင် မီးသတ်ဦးစီးမှူး ဦးထွန်းထွန်းစိုးက ဒီမိုကရေ စီတူဒေးသို့ ပြောကြားသည်။
အဆိုပါမီးလောင်ခဲ့မှုကြောင့် အခြားအဆောက်အအုံများနှင့် အိမ်များသို့ ကူးစက်လောင်ခဲ့သော်လည်း လူ၊ တိရစ္ဆာန် ထိခိုက်ဒဏ် ရာရရှိခြင်းမရှိခဲ့ပေ။
ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ လျှပ်စစ်မီးအား ပေါ့ဆစွာအသုံးပြုခဲ့ သူ မူဆယ်မြို့ ခရစ်ယာန်ရပ်ကွက်နေ မီးစတင်လောင်သော အိမ်ရှင် ဦး— အား မူဆယ်မြို့မရဲစခန်းမှ (ပ)၃၁/၂ဝ၁၉၊ ရာဇသတ်ကြီးပြစ် မှုပုဒ်မ-၂၈၅ ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူထားကြောင်း သိရသည်။
နမ္မတူ၌ မိုင်းပေါက်ကွဲ၊ တောင်ယာလုပ်ရန်သွားသူ သုံးဦးသေဆုံး
ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်တွင် သင်တန်းတက်ရန်စာရင်းများတောင်းခံသော်လည်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပ?
ဖမ်းဆီးခံ သတင်းသမားများ လွတ်မြောက်ရေး လမ်းလျှောက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်
ယခုနှစ်အတွင်း ကျင်းပမည့် ဒီချုပ် ပါတီညီလာခံတွင် ဗဟိုအဆင့် အဖွဲ့များ တိုးချဲ့မည်
ထိုင်း ပတ္တရားကမ်းခြေ အပန်းဖြေမြို့၌ လိင်သင်တန်းကျောင်း ဖွင့်သူ ရုရှားလူမျိုး ၁ဝ ဦးကို ထို?
ပထမဆုံးအကြိမ် ဆိုင်ကယ် လမ်းကြမ်းစီး (Myanmar Enduro 2017) ပြိုင်ပွဲတွင် ၈၄ ဦး ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်